Kismaayo: Alshabaab oo sheegtay dilkii Ciise Kambooni iyo maamulka Juba oo howlgal ku jira – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kismaayo: Alshabaab oo sheegtay dilkii Ciise Kambooni iyo maamulka Juba oo howlgal ku jira
A warsame 18 February 2014 4 April 2019
Kismaayo – Mareeg.com: Alshabaab ayaa sheegtay dil xalay Kismaayo loogu geystay taliyihii amaanka maamulka u qaabilsanaa magaalada Kismaayo, kaasoo lagu magacaabi jiray Ciise Kambooni.
Sarkaal katirsan Xafiiska Warfaafinta Xarakada Alshabaab oo la hadlay mid ka mid ah baraha Alshabaab ku leeyihiin Internet-ka ayaa sheegtay mas’uuliyadda dilka Ciise Kambooni oo macno weyn ugu fadhiyey maamulka uu hogaamiyo Axmed Maoobe.
“Ciidanka Mujaahidiinta ayaa xalay howlgal khaas ah ka fuliyay Kismaayo waxayna ku khaarijiyeen sarkaal dhbibaato ku hayay shacabka Muslimiinta, Howlgalka oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa lagu dilay Ciise Kaambooni iyo laba kamid ahaa ciidankii ilaalada u ahaa”ayuu yiri sarkaalkaas oo aan magaciisa la sheegin.
Ninkaan ayaa sheegay iney qabteen mid ka mid ah ilaalada Ciise Kambooni, iyo hubkii uu watay, “Ciidanka Mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen mid kamida askartii ilaalada u aheyd Ciise Kaambooni iyo hubkii uu watay, askarigaasi gacanteena ayuu ku jiraa, dhawaan ayaanan Maxkamad soo taagi doonnaa” ayuu sidoo kale yiri sarkaalkaas ka tirsan Alshabaab.
Dhanka kale, ciidamada Maamulka KMG ee Jubba, ayaa Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose, waxa ay xalay ka sameeyeen howlgalo xoogan oo lagu baadigoobayo cidii ka dambeysay dilkii loo geystay Taliyihii Nabadsugida Kismaayo.
Ciidamo badan oo Maamulka Jubba ka tirsan ayaa xalay ku yaacay xaafadaha kala duwan ee Magaalada Kismaayo, iyadoo sidoo kale isla Kismaayo xalay lagu dilay 2 ruux oo ciidanka ay tuhmeen.
Ciidamada, ayaa waxay dilkaan ka geysteen Xaafadda Guulwade, ka gadaal markii habeenimadii xalay ahayd Magaalada Kismaayo lagu dilay Taliyihii Ciidanka Nabad Suggida ee Maamulka Jubba Ciise Kambooni.
Mid ka mid ah labada nin ee la dilay ayaa ahaa ganacsade lagu magacaabi jiray Baashi Cali Xasan “Sandheere”, oo ka mid ahaa ganacsatada caanka ka ah Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ee Magaalada Kismaayo.
Lama garanaayo waxa sababay in ciidanka Jubba ay labadaan nin ku dilaan Magaalada Kismaayo, iyadoo sidoo kalana aynaan ka hadlin laamaha ammaanka ee Maamulka KMG ah ee Jubba.
Xalay saacada markii ay aheyd 10:00 ayaa waxaa guud ahaan hawada laga saaray Isgaarsiinta Magaalada Kismaayo, iyadoo marqura laga warhelay taleefoonka gacanta oo aanan shaqeyneyn.
Wararkii xalay soo baxay ayaa sheegayey in Ciise Kambooni uu dilay nin ay qaraabo ahaayeen oo horay uga soo goosray Alshabaab, islamarkaana ka mid ahaa ilaaladiisa gaarka ah.
DEG DEG: Taliyihii Nabadsugida maamulka KMG Juba oo caawa lagu dilay Kismaayo
Raysul Wasaare Cabdiweli Sheekh iyo wafdigiisa oo kusii jeeda dalka Kenya